Iyi ndiyo yakatemwa edition yeApple Watch Series 6 Nhema Kubatana Unganidzo | Ndinobva mac
Iyi ndiyo yakatemwa edition yeApple Watch Series 6 Nhema Kubatana Unganidzo
Iyo Cupertino femu iri kuda kurwira kodzero dzenharaunda yevatema uye ichatotanga chirongwa chakaganhurirwa Apple Watch iyi Kukadzi mumavara emureza wePan-Africa. Apple ichapemberera Nhoroondo Yevatema Mwedzi nemanyorerwo mwedzi unouya uye iyi yega wachi ichave iri kutengeswa mumwedzi, apfuura Kukadzi vachazvibvisa pamusika.
El Apple Kuona Mutsara 6 Nhema Kubatana Unganidzo yakaziviswa mu Webhusaiti yeApple masikati ano pamwe nehumwe mushandirapamwe. Iyo wachi inowedzera yakasarudzika tambo inoratidzawo yemahara uye yakasarudzika yakatarisa iyo ichave inowanikwa kune vese vashandisi vane Apple Watch.
Apple yakave yakakomba nezvekurwisa rusaruraganda
Zviitiko zvakaitika mwedzi mishoma yapfuura muUnited States nesangano reBlack Lives Matter, zvakagadzirwa mushure mekufa kwaJorge Floyd mumaoko emapurisa, zvakasimudza mhoni pasi rose uye kuApple. Zvino zvavanoda ndizvo tsigira zvakanyanya sezvinobvira masangano makuru kwazvo anogona kurwisa rusarura uye muCupertino vachapa rutsigiro kune vatanhatu vavo, pakati pazvo kuwedzera kune Nhema Hupenyu Matter ndiyo NAACP hwaro uye European Network inopesana neRusarura.
Iyo Apple Watch Series 6 Nhema Kubatana ichave nemutengo wemadhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe emadhora eiyo vhezheni ineGPS uye pamusiyano wemaseru mutengo we399. Tinoreva kuti mutengo wacho wakangofanana chaizvo nemhando dzemhando yepamusoro asi wedzera iyi tambo nyowani ine mavara aya. uye chero Nhema Nhoroondo Mwedzi Mubairo seyakanyorwa kumashure yewachi pachayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyi ndiyo yakatemwa edition yeApple Watch Series 6 Nhema Kubatana Unganidzo
"In NaDhiyabhorosi", iyo nyowani miniseries yeApple TV +
Apple inoburitsa iOS 14.4, watchOS 7.3 uye tvOS 14.4